ရေချိူးခန်းသုံး Floor Standing Base Cabinet
ဒီဇိုင်းလေးကတော့ ပုံတွင်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲဗျာ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နဲ့ အမြင်အေးပြီး စိတ်ကြည်နူးစေပါတယ်။ ရေချိူးခန်းသုံး Cabinet လေးတစ်ခုပါ။ ဘေစင် နှင့် ဘီဒရိုတစ်ဆက်တည်း ပါဝင်ပြီး မှန် နဲ့ဆိုလည်း တစ်တွဲတည်းပါ ဗျာ။ ရေပူ ရေအေး ၂မျိူးလုံး အသုံးပြုနိုင်ပြီး သဘာဝ ကျွန်းစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံသည်။ ရေချိူးခန်းသုံး တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းများကို တစ်နေရာတည်း သေသေသပ်သပ် ဘီရိုထဲတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ လိုအပ်သည့်အချိန်မှာ ပစ္စည်းပျောက်လို့ လိုက်ရှာရတဲ့ ဒုက္ခမှ ကင်းဝေးစေသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကိုတော့ အာမခံပါတယ်။ ဆွေးမြေ့ခြင်း၊ ချစားခြင်း နှင့် အလွယ်တကူ ပျက်စီးခြင်းများ မရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ လူကြိုက်များပြီး အသုံးများသော Brand တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်ခံ့ ပြီး အသုံးဝင်သော ကွန်ပျူတာ စားပွဲ ( Computer Table )
SKK Family ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အိမ်သုံး ၊ ရုံးသုံး ၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ပရိဘောဂ ပစ္စည်း တစ်မျိုး ဖြစ်သည့် ကွန်ပျူတာ တင် စားပွဲကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့်် ဖြူး ရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း ကွန်ပျူတာ စားပွဲ ( Computer Table ) သည် ကျွန်းဖြင့် ပြုလုပ် ထား သောကြောင့် ခိုင်ခံ့ သပ်ရပ် လှပသည့် အပြင် ကြာရှည် အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ကွန်ပျူတာ အသုံးပြု ရာတွင်လည်း အသုံးဝင်သော ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ကွန်ပျူတာ စားပွဲ ( Computer Table ) ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြု လိုပါက SKK Family ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
New World Upper Glass Cabinet နံရံကပ် ဗီရို
150000 ~ 150000 Kyats
သံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံမည့် ဗီရိုလေးဖြစ်ပါသည်။ အပေါ်ထပ်တွင် အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပြီး မှန်အကြည်ဖြင့် ထည့်သွင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ အောက်ထပ်တွင် တစ်ဆက်တည်းအထပ် ပါဝင်ပြီး သံအပိတ်ဖြင့် ကာထားပါသည်။ သော့ပါရှိသဖြင့် မည်သည့်ပစ္စည်းမဆို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အပြင် ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းများအတွင်း ထားရှိရန် လှပသင့်တော်ပါသည်။ အရွယ်အစားမှာ W900 x D400 x H1850cm ဖြစ်ပါသည်။ WORLD MART CO., LTD မှာ လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်သုံး ၊ ရုံးသုံး ၊ Furniture များကို တစ်နေရာထည်းတွင် ဝယ်ယူရရှိပါသည်။ Online မှ ဝယ်ယူလိုသော Customer များအတွက် BaganMart.com website နှင့် baganmart.com/facebook မှဝယ်ယူရရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့သိချင်သော အကြောင်းအရာများကိုလည် ဝင်ရောက်မေးမြန်နိုင်ပါသည်။
Luxury Sofa 4
21000 ~ 25000 $
Luxury Sofa4Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/ Line ID : jenny.classical
An EXECUTIVE CUBICLE
VITO Office Furniture မှ လူကြီးမင်းတို့အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ရုံးခန်းသုံး ပရိဘောဂများကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက် ရှိသည်။ ယခုပြသထားသော Executive Office Desk/ Table Series များမှာ ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေး နှင့် လှပတင့်တယ်သော ဒီဇိုင်းများကြောင့် Company ၏ အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် အထူးသင့်တော်သော Office Series တစ်ခုဖြစ်သည်။ လိုချင်သော size နှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံများကို Company ၏ နေရာအကျယ်အဝန်း နှင့် အနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး သင့်တော်သော Furniture ကို လိုသလိုအသုံးပြုနိုင်အောင် ဆွေးနွေးအကြံပေးလျက်ရှိသည်။ ဈေးနှုန်းများလည်း အထူးသင့်တင့်မျှတမှု ရှိသောကြောင့် အဆင်ပြေစေသည်။
Luxury Sofa 5
9500 ~ 11000 $
Luxury Sofa5Sofa 4+1+1+1+1+ Middle Table +2side table = 8 pieces Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/ Line ID : jenny.classical
AKIMI (Office Furniture)ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းသော လုပ်ငန်းသုံး၊ရုံးခန်းသုံး၊ကုမ္ပဏီသုံး ထိုင်ခုံများကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်းထိုင်ခုံ၏ကိုယ်ထည်သည် စတီးလ်ဖြင့်ပြု လုပ်ထားပြီး ထိုင်ခုံအောက်ခံနှင့်ကျောဘက်ကို လည်သာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ခိုင်ခံ့ ပြီးသုံးစွဲရလွယ်ကူပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ ရုံးခန်း၊စာကြည့်ခန်း၊ကုမ္ပဏီနှင့်ရုံးခန်းတို့ တွင် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အနေနှင့် ၄င်းထိုင်ခုံကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါ က AKIMI (Office Furniture)ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Luxury Sofa 6
Luxury Sofa6Sofa 3+1+1+1+1+ Middle Table+2Side Table = 8 pieces Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/
Luxury Sofa 7
Luxury Sofa7Sofa 3+1+1+1+1+ Middle Table =6pieces Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/